Vatsigiri veWikiLeaks Vodhingura Website dzeHurumende
Vanhu vari kuzviti vatsigiri veWikiLeaks vanoti ndivo vakadhingurisa website dzehurumende yeZimbabwe, idzo dzinosanganisira yebazi rezvemari, uye bato reZANU PF.
Vanhu ava vanoti havasi kufara nekuendeswa kumatare kwebepanhau reStandard nemudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, nepamusoro penyaya yakaburitswa ne WikiLeaks yekuti Amai Mugabe vakanga vachiita huori panyaya yemangoda ekwaMarange.
Vanhu ava, vane website inonzi anonnews.org, uye vanoti havazi kufara zvachose nedanho rakatorwa na Amai Mugabe. Website yebazi rezvemari pamwe chete neyehurumende dzakanga dzisingavhuri nemusi weChishanu. YeZanu PF iri kuvhura hayo, asi iri kutora nguva yakarebesa.
Asi website yeparamende neyemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, dziri kushanda semazuva ese. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, varamba kutaura neStudio7 nezvenyaya iyi.
Masahwira eWikiLeaks ari kudhingura mawebhusaiti eavo vari kushora mabasa ebepanhau repa internet iri. WikiLeaks yakazunguza pasi rose apo yakaburitsa zvinyorwa zvevamiriri veAmerica kune dzimwe nyika, zvichataura zviri kuitika munyika idzi, uye maonero avo.
Mupepeti mukuru weWikiLeaks, Julian Assange, akasungwa muBritain achipomerwa kumanikidza vanhukadzi vaviri vekuSweden kuita zvepabonde navo uye asina kuzvidzivirira.
Pari zvino Assange ari kugara muBritain mushure mekuburitswa muhusungwa abhadhariswa zviuru nezviuru zvemadhora semari yechibatiso.
Sweden iri kuedza kuti Assange aendeswe kunyika iyi kuitira kuti anotongwa nemhosva yaari kupomerwa. Asi hapana nyika, kusanganisira America, dzati dzaendesa Assange kumatare dzichimupomera mhosva yekuburitsa muWikiLeaks mashoko akanyorwa pakati pevamiriri veAmerica munyika dzepasi rino nenyika dzacho.
Nyanzi munyaya dzezvematongero enyika, uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, VaJohn Makumbe, vanoti madzisahwira eWikiLeaks ari kuda kuratidza hurumende kuti kune vamwewo vanhu vanogona kuitadzisa kuita zvainoda.
Hurukuro naVa Johan Makumbe